Banyere Mercedes-Benz GLE site na LFOTPP】 Banyere Mercedes-Benz GLE site na LFOTPP】
Mercedes-Benz GLE ohuru nwere otutu ihe omuma. Dịka ọmụmaatụ, usoro nkwụsịtụ na-arụsi ọrụ ike bụ E-ACTIVE CODY CONTROL on a 48-volt basis is world first. Ọ bụ ezie na usoro enyemaka ndị na-enye aka na-aga n'ihu n'ihu na Ọrụ Stop-na-Go Assist. Ime dị ọbụna karị na mbara ala, nke nwere oche nke atọ nke dị na arịrịọ. Usoro mmefu nwere nnukwu ihuenyo, ngosipụta nke isi na-acha ọcha na mkpebi nke 720 x 240 pixels na MBUX Interior Assistant, nke nwere ike ịmata aka na ogwe aka aka ma kwado atụmatụ ebumnuche. Ihe mpụta imepụta abụghị nanị exudes ọnụnọ na ike, kama ọ na-esetịpụkwa ọkọlọtọ ọhụrụ maka aerodynamics na akụkụ SUV. GLE ga-enweta usoro dị iche iche nke engines na mbido ahịa na mmalite 2019. 4MATIC ọhụrụ ahụ na-eme ka a mara oke ọrụ na ụzọ na ịrụ ọrụ kachasị mma na egwu egwu. N'oge na-emecha, a ga-agbakwunye ụdị nkwụnye ngwunye na ntanetị ga-agbakwunyere na mpịakọta mpịakọta.
"GLE na-egosipụta ngosi akara Mercedes-Benz mgbe ọ na-anọgide na-eme ihe n'eziokwu ya dịka onye na-apụ n'okporo ụzọ," ka Gorden Wagener, Chief Design Officer na Daimler AG kwuru. "N'iji atụmatụ ya mee ihe n'ụzọ zuru oke bụ nkà ihe ọmụma anyị nke ịdị ọcha nke anụ ahụ, nke a na - egosi ọdịmma nke oge a. Ime n'ime ya na - akpali mmasị ya site n'iche ọdịiche dị n'etiti atụmatụ mara mma na nke mara mma na usoro dị elu nke usoro MBUX anyị." Mercedes-Benz GLE ọhụrụ ahụ nwere oke ọrụ uzo elu kachasị mma na nke ya, ya na ọnụ ọgụgụ Cd si na 0.29.
Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC na-anọgide na-erughị ebe niile
GL 300 d 4MATIC na 180 kW (245 hp) na 500 Nm dị dịka diesel anọ nke cylinder si na ezinụlọ ezinụlọ ugbu a. N'ihi na teknụzụ ndị na-emepụta ihe na-emepụtawanye ihe ọkụkụ, nnukwu ụlọ anọ dị ike sitere na ezinụlọ OM 654 ugbu a na-anọgide n'okpuru Euro 6d TEMP na-emepụta ihe ọbụna na-achọ ọnọdụ ụgbọ ala na ọnọdụ gburugburu ebe obibi. A na-eme nke a site na ntụgharị ọzọ nke catalytic reduction (SCR) nke nwere mgbazinye amonia (ASC) n'ime traktị na-ekpochapụ nke GLE.
Akụkụ ndị ọzọ nke nkà na ụzụ nke dizel cylinder anọ na-agụnye:
ihe a na-akpọ combustion usoro nke a na-akpọ steep-bowl bụ nke a na - akpọ mgbe ọ na -
ngwakọta nke ngwongwo engine engine na ígwè pistons,
NANOSLIDE® na-eme ka mkpuchi nke mgbidi mmiri ahụ,
mma ikuku na-eri nri na ikpochapu n'akụkụ,
okpukpu abụọ na-arụ ọrụ na obere nrụgide dị elu na nrụrụ turbocharger dị ala karị nke edoziri n'usoro
onye na-eme ka mmiri na-eburu mmiri na
ojiji nke ọgbọ anọ na-ejikọta ya na nrụgide ruo na 2500 mmanya.
Ụgbọ mmiri petrol isii-isii: Ịmepụta ihe n'usoro
Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC dịka nke mbụ mmanụ ụgbọ ala na mwepụta ahịa na-akwado powered site na M 256 na-akara isii cylinder engine ji nwayọọ nwayọọ na-eji 48-volt nkà na ụzụ (jikọtara ahịa ahịa: Ya arụmọrụ data: 270 kW (367 hp) na 500 Nm nke di na nwunye, yana 250 Nm nke ọzọ na 16 kW / 22 hp dị site na EQ Boost n'oge dị mkpirikpi. Onye na-ejikọta ya bụ ISG) bụ ọrụ maka ọrụ ngwakọ dị ka EQ Boost ma ọ bụ ike mgbake, ihe nchekwa mmanụ ndị e chebere na mbụ maka teknụzụ dị elu.
ISG na-ewepu mkpa maka eriri belt maka ihe mgbochi ụkwụ n'ihu engine ahụ, nke na-ebelata ogologo n'ogologo ya. Ntughari ihe omimi, ya na nrapu nke ihe oriri / nchapu, na-eme ka oghere maka nchapu ocha na-ekpochapu. Ogwe ọkụ eletrik 48-volt na-enye ọ bụghị naanị ike ndị na-ere ọkụ dị ka mmiri mmiri na mgbati na ikuku mmiri, kamakwa Integrated Starter Generator (ISG), nke na-enyekwa batrị ume site na ịrụ ọrụ ike nke ọma. .
Ijeri itoolu maka ngbanwe nke ọma na nke oma
N'ihe nile di iche iche nke GLE ohuru, ikike nke 9G-TRONIC na-ebufe ikike. Ọdịdị sara mbara nke na-agbanye otu n'ime itoolu na-enye ohere ịmelata ntụgharị ngwa ngwa na ntinye ígwè yana ọ bụ ihe dị mkpa na-akpata ọkwa dị elu nke ike ịrụ ọrụ na ịnya nkasi obi. Ogologo arụmọrụ dị elu gosipụtara na akụ na ụba mmanụ. Oge nkwụsịtụ oge na oge mmeghachi omume na-eme ka ọhụụ kachasị mma jikọtara ya na mgbanwe mgbanwe dị mma. Karịsịa na ọnọdụ ntụziaka na ọnọdụ S, 9G-TRONIC na-azaghachi ozugbo ma na-eme ka ịkwọ ụgbọala na-agba ume.
Ihe nkasi obi kachasị mma nke ntinye ngwa ngwa 9 na-agba ọsọ bụ ihe dị ukwuu. Ndị a na-agụnye usoro nchịkwa na-eme ka ọ dị mfe, nke na-eme ka mgbanwe nkedo dị mkpirikpi. Njikọ nke twin-turbine torsional damper na nkà na ụzụ okpukpu abụọ nke na-eme mgbanwe mgbanwe na-eme ka nkasi obi dị mfe. Ihe ọzọ, mgbapụta mmanụ mmanụ eletrik na-arụ ọrụ na mmalite / kwụsị ọrụ, na-eme ka isi ihe dị na ndị na-achịkwa na ndị na-eme ihe. Oge igbu oge n'agbata ọchịchọ ịkwapụ na njem nke ụgbọala ahụ na-ebelata mgbapụta mmanụ eletrik.
Na ECO ụgbọala ụgbọala, ọrụ ndị na-agba ọsọ na-enyere ndị ọrụ ụgbọ ala aka. Mgbe ụkwụ onye ọkwọ ụkwụ na-ahapụ onye ahụ na-emepee ihe, a na-achọpụta engine nke combustion site na usoro nhazi ma na-agba ọsọ. Ụgbọala ahụ na-apụta maka anya dị ogologo karịa mgbe ọ na-agafe. Mgbe onye mmepe ahụ dara mbà n'obi, njikọta n'etiti engine na usoro mkpanaka amaliteghachiri.
Mgbe ọnọdụ ịnya ụgbọ ala na ọkwa nke batrị ahụ kwere, a na-esizi na drivetrain na-agbanye combustion engine, gbanweekwa, ka ụgbọ ahụ wee nwee ike ịbanye n'ụsọ. na drivetrain. Onye na-ebido ụda na-eje ozi dị ka eletriki eletriki ma na-enyere aka ịgbatị usoro ọrụ ike nke ọma. N'oge nduzi, a na-eme ka ike kpoo ume site na onye na-ebido kpakpando ghọọ ike eletriki ("weghachite") dika okwesiri na ọnọdụ ụgbọ ala ma jiri batrị.
Karịsịa na njikọ ọhụrụ na nnyefe ihe gbasara Torque na Demand, ihe dị iche n'etiti onye ọ bụla na-akwọ ụgbọala okporo ụzọ Nkasi Obi, Egwuregwu na Ngwá Ọrụ + (naanị na EABC) bụ onye ọ bụla ahịa ga-ahụ ma họrọ ya. Ụdị ụgbọala nwere ike ịdịgasị iche iche site na ntanetịpụ na-eme ka ọ dịkwuo ala ma na-achịkwa ya.
Nkwusiokpu na ugbochi: Na-agba ọsọ ma na-apụ n'okporo ụzọ
Mercedes-Benz GLE ohuru na-enye usoro nke atọ usoro nkwusiri. N'okwu ahụ bụ isi, nkwusioru ọhụrụ a mepụtara bụ nchara. A rịọrọ ka a kwụsịrị nkwupụta ụgbọelu AIRMATIC dị ọhụrụ, nke nwere Adaptive Damping System Plus (ADS +). Dị ka ihe kachasị mkpa, 48 V ọhụrụ eletrik na-eme ka ihe ndị dị mkpa na-adabere n'ọnọdụ kachasị dị elu: E-ACTIVE CODY CONTROL. Usoro ntughari maka GLE ọhụrụ ka emeela ka mmụba nke evolushọn dịwanye mma ma dị ike karị.
Ntughari nkwusiri nile na-eketa otu ihu na azụ axle architecture - nke ọ bụla na-etinye aka na subframe ma ya mere ọ dịpụrụ adịpụ site na bodyshell. Ebube nke ndị na-elekọta ụgbọ na ndị na-arụ ọrụ axle nwere ibu karịa ọgbọ ndị gara aga. Tinyere ihe ndị siri ike karị ebe a na-emepụta ihe ndị sitere na nzaghachi nke wheel, nke a na-eme ka mmụgharị dị mma ma na-agba ọsọ nkasi obi.
Nkwụsị ụkwụ n'ihu n'ihu bụ okpukpu abụọ nke ọkpụkpọ nkuchi na mgbagwoju elu bụ nnukwu ọnọdụ, nke na-aba uru njem mmiri mgbe ọ na-apụ apụ. Ogwe aka niile na-ekpuchi oghere na ihe nkedo ndị na-achịkwa bụ ihe kachasị mma ma ọ bụ ihe ngwongwo nke ígwè na-edozi na-enye ọnọdụ dị mma maka ụda ntụgharị. Nhazi ọhụrụ nke axle n'ihu na-eme ka a mata mmeghe dị iche iche nke ogologo oge na nke mpụta, nke na-erite uru ma ụgbọala ahụ dị ike na nkwenye nkwenye.
Ntughari nkwado anọ a na-ejikọta echiche nke mbipụta bu ụzọ, ma enwekwuola ọganihu gbasara ịdị arọ, nkwenye nkwụmkpụ, nsogbu nke ụgbọala na nkasi obi dị mma. Ogwe aka ya na-ejikarị aluminom: ikuku ụkwụ bụ site na ihe nkedo na-agbanye ala nke ala ala na ihe mgbakwasị ụkwụ nke aluminom nke dị elu, nakwa dị ka ihe nkedo dị elu nke mpempe akwụkwọ.
A na-emepụta axles n'ihu na azụ ka ha wee nweta usoro nkwukpọ atọ a, ma gbanwee ka ha wee nwee ike ịnagide ọbụna nrụgide kachasị ike na arụmọrụ. Akwụsịtụ ụgbọelu AIRMATIC na ụdị nchịkwa E-ACTIVE BODY TRANSLATION na-agụnye inwe ike ịme ihe nkwụsịtụ dị iche iche na ụzọ ọkwọ ụgbọala dị iche iche. Nkwụsịtụ ígwè ahụ na-enyerịrị nkwekọrịta dị mma n'etiti nnukwu nkwusioru ntụsara ahụ na nchekwa dị mma.
Ụkpụrụ maka nkasi obi: AIRMATIC air suspension na-emegharị damping
Dị ka ọ dị, nhọrọ nhọrọ AIRMATIC ikuku oyi nwere ike ime ihe ọbụla ka mma, ebe ọ na-emeghachi omume nke ọma ma nwekwaa ike ijikwa ihe dị iche iche ka ọ dị iche na nkwụsị ala dịka ọnọdụ ụgbọ ala. Ọ na-ejikọta bellow nke ikuku dakọtara na ADS + -dampers na-eme mgbanwe ndị àgwà ha nwere ike ịme n'ụzọ zuru ezu na-akpaghị aka na wiilị nke ọ bụla, ma mkparịta ụka ma nlọghachi. N'iji usoro ihe mgbagwoju anya na algọridim, a pụrụ idozi ndị na-ekpuchi mmiri maka nzaghachi dị iche iche dị ka ọnọdụ ihu igwe. Ọ bụrụ na ọ bụ nanị otu wiil na-ekpuchi ihe mgbochi, dịka ọmụmaatụ, a na-edozi damper maka àgwà ndị dị nro iji belata nnyefe nke jolt na nke ọzọ nke axle, ya mere na akụkụ nke ndị njem.
N'ọdị n'ihu, isi iyi na mmiri mmiri na-etinye n'ime otu nkwụsịtụ, ma ha dị iche na azụ azụ. Dika Mercedes-Benz bu nke mbu, usoro ikuku oyi nke AIRMATIC nwere ikuku ikuku ekpuchi nke nwere ike ibuli ma kwusi mkpochapu ngwa ngwa, mgbe o na ejighi olu. A na-ebu mgbapụta ahụ site na ọkụ eletrik 400 W.
E wezụga inye onye ọkwọ ụgbọala ikike ime mgbanwe n'onwe ya na nhazi ala ma họrọ ụzọ ụgbọ ala, usoro nchịkwa AIRMATIC na-eji sophisticated sensor systems na algorithms iji nyochaa ọnọdụ ụgbọala ma mee mgbanwe ntụgharị. Dịka ọmụmaatụ, n'ụgbọala, ọ na-eji 15 mm mee ka ụgbọ ala ahụ dị ala iji mee ka ọnọdụ kachasị mma maka ịkwọ ụgbọala na-agba ọsọ ọsọ ọsọ.
Nhọrọ kachasị mma: usoro ịkwọ ụgbọala maka arụ ọrụ na na-apụ
Site na ịhọrọ usoro ịkwọ ụgbọala Egwuregwu, onye ọkwọ ụgbọala ahụ nwere ike ịkwụsị nkwụsị ala kpamkpam site n'otu ọnụego, yana dị ka 25 mm na Sport + mode. Nke a na-agbada bụ iji hụ na nrụrụ dị ala dị elu, si otú ahụ na-eme ka nkwụsi ike na ịdị elu dị elu karị. Mgbe ị na-apụ apụ-okporo ụzọ, ụdị ọkọlọtọ nke AIRMATIC na-enye ohere mmụba 60 mm na njedebe ala.
Nhọrọ nke ON & DEPLACEMENT na-enye ohere dị iche iche dị iche iche na njedebe ala: site na 30, 60 ma ọ bụ ọbụna 90 mm. Ijikwa nkwụsị ala mgbe apụ-ụzọ na-ewe ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'ime akaụntụ, dịka nkwụsị elu na-adaba na nkwonkwo ụkwụ nke ụgbọala.
Mgbe onye ọkwọ ụgbọala na-ahọrọ ntụpụ ala mgbe ọ nọ na-aga ma ọ bụ na ọ na-agagharị, oriọna na-egbukepụ ruo mgbe ọkwa a họọrọ. Ọ bụrụ na onye ọkwọ ụgbọ ala anaghị agbazikwa ala mgbe ụgbọala ahụ nọ n'okporo ụzọ, usoro nkwụsịtụ na-ebelata nkwusioru ahụ dabere na ọsọ iji hụ na ọkwọ ụgbọala na-adị mma n'oge niile.
AIRMATIC na-enye ihe ọzọ dị irè iji kwado ibudata na ibudata nke oghere akpa: ikpeazụ 50 mm nwere ike ịdata azụ azụ site na mgbanaka dị iche na oghere akpa. Otú ọ dị, ọrụ ahụ anaghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ejiri njikọta ígwè.
Ọrụ nke AIRMATIC nwere ike ịgbatịkwuo ya na onye omekorita E-ACTIVE CONTROL.
Usoro usoro braking: Ọbụna akụkụ dị ukwuu
A na-eji nwayọọ nwayọọ emezi ihe dị iche iche nke GLE ọhụrụ. N'ikwekọ na mmepe nke nkwusioru ahụ, nkwakọba diski ahụ dị ugbu a karie 400 mm na dayameta. Site na mwepụta engine nke 200 kW elu, akụrụngwa azụ azụ na-esikwa na ventilated. Nnukwu ígwè nkedo na-eme ka ọ dịkwuo mma ịnwụ anwụ ma belata ya. Ndị na-ese onyinyo ndị na-ese n'elu mmiri na-ese onyinyo na-ebuwanye ibu. Nke a na - eme ka njigide freking dịtụ anya, nkwụsi ike ka mma mgbe ị na-agba ụkwụ na ndụ ogologo oge maka iyi akụkụ.
Site na ngụkọta Engineering na njikọ E-ACTIVE BODY CONTROL, usoro mgbaghoju anya dị ike nke nwere mgbagwoju anya a na-ejikọta ya na ngwongwo a na-akpọ na 21-inch ma ọ bụ karịa.
A na-eji ọkụ eletrik arụ ọrụ nke GLE ọhụrụ, na-ejikwa njikwa breeze ejikọta ọnụ. Ọ bụrụ na ọ gbanwere ya na aka ekpe nke mgbago ọkụ na-agbanwe agbanwe na dashboard ma na-agba ọsọ ọsọ n'elu 4 km / h, nke a na-ebute freking mberede nke na-adịghị eme site na bọtịnụ ụgbọala ma site na njikwa ọrụ, na-esonyere site na mbido nke usoro mgbasa ozi ihe ize ndụ.
Ebube na ngwa ngwa dị arọ: Agha maka ịdị arọ zuru oke
Otu akụkụ ahụ ga-enwe ike nke ihe niile: nkwụsị ike n'oge ntiwapụ mgbe ị na-edebe batrị na-ezigara dịka o kwere mee, na-edebe vibrations na ụda dị n'ime ime, na-enye ọtụtụ ohere maka njem na nkasi obi. N'inye ihe a niile, o doro anya na SUV bodyshell enweghị ike ịbụ flyweight. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ghaghị ịdị arọ karịa ka o kwere omume. Nke a chọrọ mgbalị dị ukwuu, ọtụtụ njedebe - na ọtụtụ ezi echiche.
Site n'ịdị elu ya, bodyshell nke ọhụrụ GLE na-enye nnukwu onyinye iji na-agbaso ụkpụrụ ndị na-achọsi ike maka ọdịiche ụgbọ ala, nkasi mkpọtụ, àgwà a na-ahụ anya na nchebe mberede. Nke a pụtara na ọtụtụ n'ime ihe ndị dị na ya ga-ejikọta ọtụtụ ọrụ na-eweta ihe ndị dị elu, ma na-agbaso ụkpụrụ nke ọgbara ọhụrụ na-egosi mpempe akwụkwọ.
Azịza ya bụ nchikota nke ígwè dị elu na ihe dị arọ maka mgbakọ dị iche iche ebe a na-arụpụta àgwà ndị a chọrọ, na nke kachasị mma na geometry niile. Dịka ọmụmaatụ, bonnet na n'ihu nku nke Mercedes-Benz GLE ọhụrụ bụ nke e ji akpụkpọ anụ mee, ihe nkedo ndị na-ekpo ọkụ na n'ihu na azụ axles bụ nke na-egbuke egbuke aluminum na akụkụ ndị dị n'azụ na-ejikọta ya na aluminum. Onye na-aga n'ihu na-agụnye ogige organo ọhụrụ.
Akụkụ ndị a na-arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe na agbanwe ihe omimi
Maka oge mbụ, mgbakọ ahụ nke ụlọ njem na-eji ihe a na-akpọ ya, nke a na-akpọpu oghere. A na-akpọpu ogwe ndị dị iche iche dị iche iche, nke mere na nke ahụ agwụchara, nke nwere ihe ndị nwere ike nwere ezigbo mgbidi ọ bụla n'akụkụ ọ bụla. Nke a pụtara na mgbidi elu dị elu na-eme nanị ebe ha dị mkpa n'ezie - na GLE ọhụrụ a dị na mpaghara oghere etiti nke na-eme ka azụ azụ nke nnukwu ụlọ a ma na-emetụta ahụ ike nke bodyshell na ntiwapụ.
Ụfọdụ nkwado dị iche iche dịka ntụgharị dị iche iche dị iche iche, iji nwee ike ịnagide ọkwa dị iche iche nke ígwè na ígwè ọrụ ma nọgide na-enwu dịka o kwere mee. A na-ewu ngwụcha azụ na atọ dịgasị iche iche iji chebaa usoro dị iche iche nke ogige azụ.
Maka ike kachasị mma, ihe a na-ahụ maka akụkụ ahụ kachasị mma na nke na-ejikọta akụkụ ndị ahụ ka a na-eme ka ha ghara ikwe ka ọ ghara ịdị na-esere onwe ha ka ha wee nwee ike ikwe ka mmechi dị n'etiti ogwe ndị ahụ. Ihe si na bodyshell pụta bụ na n'agbanyeghị nnukwu oghere ụlọ iji kwe ka anyanwụ na-egbuke egbuke, ọ na-enye nkwụsi ike karịa ike nke okpukpu karịa nke ihe nlereanya nke bu ụzọ.
N'otu oge ahụ, na otu ọrụ ahụ, akụrụngwa nke GLE ọhụrụ anaghị adị arọ karịa nke ọgbọ gara aga ọ bụ ezie na ọ nwere ọfụfụ n'ogologo yana ogologo oge n'ogologo, ọ bụ ezie na e mere ya iji mee ka ọ dịkwuo ike ihe gbasara US / NCAP na test EuroNCAP.
N'ime ihe niile, a na-enweta ego nchekwa nke 62 n'arọ maka mkpụrụ ndụ diesel anọ nke cylinder ọhụrụ nke GLE, dịka ọmụmaatụ, ma e jiri ya tụnyere onye bu ya ụzọ na ụdị ihe eji eme ya. Ngwá ọrụ dị iche iche dị arọ na-eme ka nke a kwe omume:
mmụba na ogo nke aluminom site na atọ ruo 5.5 percent,
mmụba na ogo nke ígwè dị elu / ike-ọkụ,
ojiji nke usoro mmekorita ndi ozo, tinyere nchikota nchikota n'aru aru,
a na-echekwa echiche dị elu nke ọrụ,
oche dị elu,
mmeri a na-adaba na nha ígwè,
a ọkụ ọkụ drivetrain na
otutu ihe ndi ozo na ihe omuma, di ka usoro bu ihe eji achikota oku ma obu onye ozo nke mejuputara.
Nke a emeela ka uru bara uru nke GLE ọhụrụ site na njirimara ndị dị ka ụgbọ okporo ígwè buru ibu n'ogologo ogologo, mmụba 30 kW na njikwa ígwè, ikwekọrịta oke ugbo elu na NVH na ọkwa dị elu dị ka WLTP mgbe ị na-ejide ya. otu nnukwu ụgbọala dị arọ. Tụkwasị na nke ahụ, a gbasapụla ụdị ọkọlọtọ na-agụnye ọdụdụ akpaka, igwefoto na-agbanye, nkwụnye ọkụ ọkụ na nkwupụta ụda ihe na-egosi ihe ngosi abụọ na 12.3 ".
Kpọọ na Action >> >> LFOTPP Mercedes GLE (W 166) / Mercedes GLS (X 166) nchedo ihuenyo igodo